Ny lalao Pythian, tantara ary fanatanjahantena ao Delphi | Fitsangatsanganana tanteraka
Efatra no lehibe Lalao Panhellenic ny fahagolan-tany: ny Lalao Olaimpika malaza, ny Lalao Nemean any Argos, ny Lalao Isthmian any Korinto ary ny Lalao Pythian nitranga tao amin'ny Toerana masin'i Apollo ao Delphi. Hodinihintsika anio ity lahatsoratra ity.
Ny tanànan'i Delphi dia any amin'ny faritr'i Gresy Phocis, sahabo ho 150 kilometatra andrefan'ny Atenas. Efa ho telo arivo taona lasa izay, izay toerana tokana sy ala fotsiny, dia nisy toerana masina natsangana ho fanomezam-boninahitra an'i Apollo andriamanitra izay nipetraka tao koa iray amin'ireo oraketa malaza indrindra tany Gresy taloha.
Niantso ny andiana pretra pythias Izy ireo dia niandraikitra ny fitazonana ny oracle sy ny fampahafantarana amin'ny mpitsidika ny volavolan'andriamanitra (ny teny hoe "mpisikidy" nalaina avy tamin'izy ireo). Pythias dia nantsoina ho fahatsiarovana ilay dragona Piton, bibilava goavambe nonina tamin'ny toerana novonoin'andriamanitra.
Ny lazan'ity oracle ity dia nahatratra ny fara tampony nanomboka tamin'ny taonjato faha-XNUMX tal. Vokatr'io fitohizan'ny mpitsidika tsy tapaka io dia natsangana ny tempoly, tsangambato ary rafitra maro hafa.
Rava ao amin'ny tempolin'i Apollo ao Delphi
Ankoatr'izay, tany Delphi dia nisy toerana an'ohatra fantatra amin'ny anarana hoe Omphalos, Ivon'izao tontolo izao " izay notondroin'i Zeus tamina vato conical lehibe.
1 Fankalazana ny lalao Pythian
1.1 Ny fijanonana masina
1.3 Fifaninanana poetika sy mozika
1.4 Fifaninanana ara-panatanjahantena
2 Faran'ny lalao Pythian
Fankalazana ny lalao Pythian
Tamin'ny taona 590 talohan'i Kristy dia natao voalohany ny Lalao Pythic izay hanana a vanim-potoana valo taona (Tsy toy ny Lalao Olaimpika, izay natao isaky ny efatra). Ireo niandraikitra ny fandaminana azy ireo dia pretra nantsoina biby miain-droa, avy amin'ny tanàna grika samihafa.
Ny angano dia nilaza fa ny lalao dia nataon'i Apollo tenany taorinan'ny namonoany an'i Python. Ny angano dia mitantara ny fomba nitondran'andriamanitra an'i Delphi tamin'ny fehiloha laurel teo an-dohany. Noho io antony io dia nahazo valisoa ireo mpandresy tamin'ny Lalao Pythic fehiloha laurel, farihy iray izay nanahaka azy tamin'ny fankalazana hafa sy ny fifaninanana fombafomba.
Ny fijanonana masina
Toy ny nitranga tamin'ny Lalao Olaimpika, nandritra ny volana maro talohan'ny nanombohan'ny Lalao Pythic maromaro manambara antsoina hoe teoria nitety an'i Gresy izy ireo mba hanambara ny daty nanombohany.
Ny tanjon'ireto iraka ireto dia ny hahatratra ny toerana rehetra io antso io. Ny tanàna nanaiky handray anjara amin'ny lalao dia tokony hampiato avy hatrany ny ady ary hanolotra ny antso "Truce masina." Ireo tanàna izay nandà tsy hanao izany dia nesorina, izay fahaverezan'ny voninahitra.
Ny andro voalohan'ny Lalao Pythian dia natao ho an'ny lanonana masina ho fanomezam-boninahitra an'i Apollo. Nisy lehibe fanatitra (hecatombs), filaharana y fanasana.
Nisy ihany koa ny fampisehoana tantara an-tsehatra izay nahatsiarovan'ny adin'ny epic ny andriamanitra tamin'ilay bibilava Python nahatsiravina. Hampiantrano an'ity seho malaza ity Teatra Delphi, iray amin'ny teatra grika voatahiry tsara kokoa.
Fifaninanana poetika sy mozika
Taorian'ny lanonana fanokafana dia natomboka tamin'ny andiany ny Lalao Pythian fifaninanana mozika izay nanehoan'ireo mpandray anjara ny zava-maneno nilalao fahaiza-manao toa ny citer. Miaraka amin'ny fifaninanana horonantsary, teatra, amboarampeo ary dihy. Tamin'ny faramparan'ny vanim-potoana dia nisy ihany koa ny fifaninanana tononkalo.
Taorian'ny andro natokana ho an'ny kanto dia nanomboka ny fifaninanana ara-panatanjahantena. Ny porofo malaza indrindra dia ny hazakazaka kianja (178 metatra eo ho eo), an'ny dingana roa, la hazakazaka lava amin'ny kianja 24 sy ny hazakazaka sandry, izay nifaninananan'ireo mpihazakazaka nirongo fiadiana amin'ny hoplitic panoply; Nisy koa ny fifaninanana natao mitsambikina lava, discus ary manipy javelin, ary koa ireo fitsapana ady amin'ny tolona isan-karazany toa ny an'ny pankration. Nisy sokajy telo araka ny taonan'ny mpifaninana.
Natokana ho an'ny andro farany amin'ny Lalao Pythian fifaninanana mpitaingin-tsoavaly. Nisy sokajy roa: hazakaza-kalesy misy soavaly roa (andry) ary soavaly efatra (kalesy). Ireo fifaninanana ireo dia natao tamin'ny emihazakazaka izy any amin'ny tanàna manodidina an'i Cirra, kilometatra vitsivitsy miala an'i Delphi. Na izany aza, ao amin'ny fitoerana masina ny sarivongana malaza an'ny Charioteer an'ny Delphi, ankehitriny voatahiry ao amin'ny tranombakoka arkeolojika ao an-tanàna. Misolo tena ity sary sokitra varahina ity Polisy Gela, mpampijaly avy any Sisila grika izay nanambara ny tenany ho mpandresy tamin'ny lalao tamin'ny fotoana maro.
Faran'ny lalao Pythian
Ny lazan'ny Lalao Pythian dia nitohy na dia taorian'ny nandresen'ny Romanina an'i Gresy aza, na dia nanomboka niadana aza izy ireo vanim-potoana fihenam-bidy. Nanohy nandray mpitsidika ny oracle ary nitohy ny lalao, saingy nihena tsikelikely ny lazany sy ny lazany.
Ny harena napetraka tao amin'ny tempoly tao Delphi dia norobain'ny Goths sy Heruli tamin'ny taonjato faha-XNUMX AD. Ary farany, nitsahatra tsy nankalazaina ireo lalao tamin'ny taonjato manaraka.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Fitsangatsanganana tanteraka » Ny Lalao Pythian, tantara ary fanatanjahantena ao Delphi
Resipeon'i Puto, iray amin'ireo pastry Filipiana matsiro indrindra